Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo la kulay Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Sacuudi Carabiya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaRa’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo la kulay Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Sacuudi Carabiya
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo la kulay Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Sacuudi Carabiya
Hiiraan Xog, Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali kheyre oo booqasho rasmi ahi shalay uga bilaabatay dalka Sucuudiga, ayaa kulan la qaatay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalkaas Caadil Bin Axmad Al jubeyr.
Kulanka oo ka dhacay aqalka martida ee la dejiyey wafdiga Ra’iisul Wasaaraha, waxaa sidoo kale ka qayb galay mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Sucuudiga, kuwaasoo ay kamid ahaayeen Wasiiru Dowlaha Arrimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sucuudiga Axmad Cabdul Casiis Qataan, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sucuudiga Caadil Mirdaad iyo Safiirka Sucuudiga ee Kenya iyo Soomaaliya Muxamad Bin Cabdulqani Al khayaad.
Wasiir Jubeyr ayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uga mahadceliyey booqashada uu ku yimid Riyaad iyo weliba sida uu usoo ajiibay casumaaddii uu u fidiyey Boqorka Sucuudigu Boqor Salmaan.
Mudane Khayre ayaa isna dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinkiisa Sucuudiga, isagoo ka mahadceliyey soo dhoweynta diirran ee dowladda Sucuudigu u samaysay wafdigiisa.
Kulanka labada mas’uul ayaa hordhac u ahaa shirar Ra’iisul Wasaaruhu muddada uu Riyaad ku sugan yahay la qaadan doono madaxda ugu sarreysa Boqortooyada Sucuudiga, shirarkaas oo diiradda lagu saari doono xoojinta xiriirka diblumaasiyadeed iyo iskaashiga labada dal.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ay qayb ka yihiin Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Wasiirka Warfaafinta, ayaa shalay oo Talaado ahayd gaaray magaalo madaxda Sucuudiga ee Riyaad.
Booliska dalka Turkiga oo faafiyey sawirrada dad looga shakisan yahay dilkii Wariye Jamal Khashoggi
AU warns negative impact of foreign military bases in Djibouti